होम स्कुलिङ लकडाउनको शैक्षिक विकल्प : शिक्षण योजना र कार्यान्वयनका चुनौती
राजकुमार महर्जन, असार ८, २०७७
लकडाउन भएको ९१ दिन लाग्यो । गएको ९० दिनमा कूल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ९०२६, निको भएर घर फर्किनेको सङ्ख्या १७७२ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २३ पुगेको छ । सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ । स्कुल खुल्ने छाँटकाँट छैन ।...
प्रभावकारी अनलाइन कक्षा : शिक्षक, अभिभावक, समुदाय, स्थानीय र सङ्घीय सरकार क-कसको भूमिका के ?
राजकुमार महर्जन, असार १, २०७७
अभिभावक स्वयंको अग्रसरता : लकडाउनमा शिक्षण सिकाइका ६ विकल्पहरू
राजकुमार महर्जन, जेठ २६, २०७७
राजकुमार महर्जन, जेठ १९, २०७७
मानिसहरूको आवत जावत खासै नहुने एकान्त ठाउँमा केही वर्षौदेखि एक जना योगी तपस्यारत थिए । धेरैजसो ध्यानमै लीन हुने उनी गाउँलेहरूले मायाले दिने खानेकुराले गुजारा चलाउँथे । योगीको बरेमा सुनेर एक जना शोधकर्ता उनलाई भेट्न आइपुगेछन् । शोधकर्तालाई देख्नासाथ योगीको...
ढोकैमा आएका चुनौतीकाे सामना गर्ने उपायः स्व–अनुशासनदेखि स्व-उत्पादनकाे 'मेड इन नेपाल'सम्म
राजकुमार महर्जन, बैशाख १५, २०७७
बन्दाबन्दी अर्थात् लकडाउन जति लम्बिँदै छ, जनजीवन उति नै सङ्कटपूर्ण बन्दैछ । अमेरिका, ब्राजिल लगायतका देशहरूमा लकडाउनको विरुद्धमा र्यालि निक्लन थालेका छन् । हाम्रो देशमा पनि असन्तुष्टिका आवाज बिस्तारै सुनिन थालेका छन् । हाम्रो देशको सरकारलाई कोरोना महामारीलाई व्यवस्थापन गर्ने...
राजकुमार महर्जन, बैशाख ८, २०७७
हिजोसम्म लकडाउन (बन्दा बन्दी), क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन आदि शब्दहरूबारे पूर्णतया अनभिज्ञ थियौँ । आज ती विषयहरूमा हामी सानातिना विज्ञ बनिसकेका छौँ । हिजो घर बस्ने फुर्सद नपाउँदा नरमाइलो लाग्थ्यो । आज बाहिर निक्लन नपाउँदा दिक्क लागिरहेछ । अनि भोलि ? सम्भावना...
देशभक्ति प्रमाणित गर्ने अवसरः शिक्षा दिने नाममा नोकर उत्पादन गर्ने कारखानालाई बन्द गर्ने हाे कि !
राजकुमार महर्जन, बैशाख १, २०७७
विगतलाई नियाल्दा बि.सं.२००७ सालभन्दा अघि जनताले दुःख पाउनुको कारण राणा हुन् भन्ने पुर्खाले बुझे । सहिदहरूको रगतका टिका लगाएर राणा फ्याँके । तर २००७ सालको प्रजातन्त्र बाँदरको हातमा नरिवल साबित भयो । २०१५ सालको आम निर्वाचनमा देशको इतिहासमै पहिलो पटक...
राजकुमार महर्जन, चैत्र २४, २०७६
एक दिनको कुरा हो, दुईवटा बाँदरहरू गाउँ डुल्दै थिए । छुकछुक गर्दै दायाँबायाँ नहेरी कुदेकाले अचानक एउटा इनारमा खसेछन् । इनारबाट निस्कने प्रयासमा तिनीहरू अत्तालिएर जोडजोडले उफ्रिए । दुईमध्ये पहिलो बाँदर निकै नै रोयो, चिच्यायो, गुहार माग्यो । एकान्त ठाउँ,...
राजकुमार महर्जन, चैत्र ३, २०७६
आज पनि मलाई तपाईंसँग अनौपचारिक कुराकानीमै रम्न मन लाग्यो । तपाईंको पूर्ण साथ पाउने आशाका साथ मेरा कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु । अघिल्लो हप्ता हामीले छोराछोरीहरूप्रति तपाईंका सपना, इच्छा वा चाहनासँगै उनीहरूको इच्छा, चाहना र क्षमताका बारेमा खुलेर छलफल गर्यौं...
छोराछोरीहरूलाई आफ्नाे सपनाको भारी बोक्ने भरियाको व्यवहार किन ?
राजकुमार महर्जन, फाल्गुन १९, २०७६
तपाईंले मनन् गर्नुपर्ने कुरा यो छ कि तपाईंको सन्तान तपाईंले होइन, केवल तपाईंमार्फत् रचिएका हुन् । तपाईंले जस्तो मन लाग्यो, उस्तै चलाउन तिनीहरू तपाईंको निजी सम्पति होइनन् । यदि तपाईंले उनीहरूलाई आफ्नो सम्पति जस्तो व्यवहार गर्नुभयो भने तपाईंबाट सृष्टिकर्ताको अपमान...
बालबालिका, खेलौना र आमाबाबुको सम्बन्ध
राजकुमार महर्जन, माघ २७, २०७६
पहिलो तथ्य हरेक आमाबाबुले आफ्ना सन्तानहरूलाई ठूलाठूला सपना देख्दै हुर्काउने गर्छन् । उनीहरूको लालनपालन, शिक्षादीक्षा र सेवा, सुविधामा कुनै पनि कमी नआओस् भनेर सबै खालका प्रयत्नहरू गर्छन् । आफ्नो बाल्यकालमा नपाएका हरेक सुख सुविधा छोराछोरीहरूलाई दिन प्रयत्नशील रहन्छन् । त्यसैले...
सिंहको डमरु, भेडाको संगत र हाम्रा छोराछोरीहरू
राजकुमार महर्जन, माघ २०, २०७६
आकाशबाट झरेको पानी मन्दिरमा झरे पवित्र जल बन्छ । बोट बिरुवामा झरे शीतको थोपा बन्छ । त्यही पानीको थोपा समुद्रमा झरे नुनिलो पानी बन्छ । दुर्भाग्यवश नालीमा झर्यो भने दुर्गन्धित फोहोर त्यही जल बन्छ । बालबालिकाहरू पनि आमाको कोखबाट जन्मिँदा...